Resaky ny mpitsimpona akotry : fanararaotam-paty amonoana ny fomban-drazan’ny sasany | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fanararaotam-paty amonoana ny fomban-drazan’ny sasany
Efa nahazo Fahaleovantena indray moa vao niha-nirongatra ny hetsika fanaratsiana ataon’ny mpankahala ny fomba atao hoe famadihana izay fikolokoloan’ny taranaka ny taolam-balon’ireo razana nipoirany. Mampitahotra ny rehetra ity ny fihanaky ny aretina pesta fa araraotin’ny sasantsasany amin’ireo olona manohitra ny fanaovana ny famadihana ity toe-draharaha miseho ity hiampangana ny famadihana ho rangory fototry ny afo. Lazaina daholo izao tranga tsy azo hamarinina, afangaro amin’ny honohono isan-karazany. Manginy fotsiny ny lainga afafy ahafahana mandresy lahatra sy hisehoan’ny fanendrikendrehana mba ho toy ny hoe resaka tena mitombina ireny.
Tsy mety amin’ny fihavanana eto amin’ny fiaraha-monina raha samy ny eto an-tanàna indray no hifanebaka mikasika ny fomba tsy iraisana. Ny hery nanjanaka teto aza tsy nahatohitra io fomba io na tafiditra tsara ao amin’
ny pôlitikan’ny fanjanahana aza ny fandravaravana ny fomban-drazan’ny zanatany. Ny mpampiely fivavahana kristianina izay finoana voalazan’ny sasany ankehitriny ho finoana nentin-drazana, no nirahan’ny fitondrana mpanjanaka hitory teny mikasika ny tsy fetezan’ny fanompoana fivavahana roa, izany hoe voaheloka ho toy ny fanompoan-tsampy ny fomba malagasy eo amin’ny fikolokoloana taolan-drazana.
Toy ny tsiny ny pesta sy ny aretim-be mifindra, araky ny hafatry ny Ntaolo ka dia alevina impito mandifitr’olona. Andraikitry ny fitondrana ny mitsinjo amin’ny fomba hentitra ny fampiharana izany. Raha vao misy ahiahy fa pesta no nitarika fahafatesan’olona iray dia ny fanjakana no mandrara ny fandevenana azy ao anatin’ny fasana ikambanana mety hosokafana. Tsy rehefa mamadika ihany ny Malagasy no mikirakira ny razana ao am-pasana fa na mandevina aza dia tsy ilaozan’izay fibatabatana ireo razana maina hanaovana toerana ho an’ilay razana lena. Tsy mitsahatra eo anefa fa maro amin’ireo havan’ny maty no mitsofoka ao anatin’ny fasana hijery ny toerany ambony farafara vato. Na tsy izany akory aza fa raha sanatria efa nandevenana olona matin’ny pesta ny fasana iray tany aloha, ny fisokafany fotsiny dia ampy ahafahan’ny aretina hanidina sy hiparitaka any ivelany. Raha fitandremana sy fitsinjovana ny fahasalaman’ny mponina no tena maniraka amin’ity fanaovana resaka be manodidina ny pesta ity dia tsy mahavita azy ny fitsarana mitongilana amin’ny fanilihana ny ratsy any amin’ny famadihana irery. Aza misy izany fa izay fasana nandevenan’olona matin’ny pesta dia voaheloka tsy ho azo sokafana intsony na handevenana na handoarana razana havadika.